Tatitra: 68% ny CEO dia tsy misy fisian'ireo media sosialy | Martech Zone
Tatitra: 68% an'ny CEO dia TSY MISY fisian'ny media sosialy
Alahady, Desambra 7, 2014 Alahady, Desambra 7, 2014 Douglas Karr
Nilaza ny CEO CEO Fortune 500 fa ny media sosialy dia manampy amin'ny famolavolana ny endrik'ilay orinasa, ny fifandraisany amin'ny mpiasa sy ny haino aman-jery ary ny endrik'olombelona amin'ny orinasa. Mahagaga, raha izany, a tatitra vaovao avy amin'ny CEO.com sy DOMO nahita fa 68% ny CEO dia tsy misy fisian'ny media sosialy mihitsy!
Raha niasa tamin'ny orinasam-pandraharahana aho, ny fanamby lehibe nanananay dia ny mampita ny fifantohan'ny orinasa, tanjona ary kolontsaina avy amin'ny CEO hatramin'ny alàlan'ny fitantanana ny mpiasa tsirairay. Ny ankamaroan'ny CEO dia nanana politika misokatra, saingy tsy nisy mpiasa sahy nita ny lohan'ny fitantanana ary natahorana hanao valiny ara-politika amin'ny alàlan'ny vavahady. Noho izany, misy CEO sasany dia misoratra anarana ao amin'ny walkabout - fotoana natokana hamakivakiana ilay orinasa ary hiresahana manokana amin'ireo mpiasa.
Ireny fihaonana ireny dia mpanokatra maso ho an'ny mpitarika anay hatrany. Minitra vitsy niresahana fa Ny mpiasa dia matetika no manokatra vavahady ho an'ny fanatsarana ny fizotran'ny orinasa, ny kolontsainy, na ny fihetsik'izy ireo amin'ny ankapobeny.
Heveriko fa tena nahakivy tokoa ny tsy nandraisan'ny CEO tao amin'ny media sosialy an'ireo antony ireo. Ny CEO dia afaka mizara, manaraka ary mifampiresaka amin'ny sehatry ny fitantanana ary mahazo sary mazava tsara momba ny fandraisan'ny orinasan-dry zareo ny lalana na ny fitarihany. Ny fikorontanana dia tsy ho afaka hihontsona ary hihombo tsy azo leferina raha fantatra mialoha. Mety hitarika fahafaham-po amin'ny mpiasa tsaratsara kokoa izany - izay mitondra hatrany amin'ny fahafaham-po ny mpanjifa.
Raha toa ianao ka CEO dia tsy ao amin'ny media sosialy - alao izy ireo ampidino ny Tatitra CEO Social 2014 ary avoahy any ny vodiny. Misaotra anao noho izany izy ireo any aoriana… angamba ao amin'ny Twitter.
Tags: PDGceo.comcnn voladomoFacebookGoogle +InstagramLinkedInceo sosialyhaino aman-jery sosialyTwitter
DandyLoop: Mizarà mpivarotra an-tserasera anelanelan'ny fivarotana
Tsy tetik'asa ny tranonkalanao